Tababaraha xulka Masar ee ay da'doodu ka hoosayso 23 jirka oo doonaya in Salaax uu u dheelo Olympic-ada - BBC News Somali
Tababaraha xulka Masar ee ay da'doodu ka hoosayso 23 jirka oo doonaya in Salaax uu u dheelo Olympic-ada
30 Nofembar 2019
Image caption Waxaa suuragal ah in weerraryahanka kooxda Liverpool Maxamed Salaax loo qaato inuu u dheelo xulkiisa Masar ciyaaraha Olympic-ada ee Tokyo ee 2020
Tababaraha xulka Masar ee ay da'doodu ka hoosayso 23 jirka, Shawky Gharib, ayaa sheegay in weerraryahanka kooxda Liverpool Maxamed Salaax uu yahay dookhiisa koobaad ee ciyaartoyda da'da weyn ee sanadka soo socda uu doonayo inuu ku daro ciyaaraha Olympic-ada xulkiisa, kuwaas oo lagu qaban doono magaada Tokyo.
Masaarida ayaa waxa ay u soo baxeen ciyaaraha kubadda cabta ee tartanka Tokyo kaddib markii ay ku guulaysteen tartankii ciyaartoyda ay da'dooda ka yartahay 23-ka sanadood ee Qaramada Afrika ee lagu qabtay isla dalkaas.
Markii xul uu u soo baxo ciyaaraha kubadda cagta ragga ee Olympic-ada waxaa tartankaasi lagu koobaa ciyaartoyda ay da'dooda ka yar tahay 23-ka sanadood hasayeeshee waxaa loo ogolyahay xulalka inay ku soo darsadaan saddex ciyaartoy oo waa weyn oo ciyaarahaasi kala qeybgala.
Maxamed Saalax oo ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka ee qaaradda Afrika
"Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Jurgen Klopp, ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxa uu shir jaraa'id ka sheegay in uusan qof ka socda Masar kala hadlin naadiga in Maxamed Salaax loogu yeero inuu ka qeybqaato tartanka Olympic-ada 2020-ka," Gharib ayaa waxa uu sidaasi u sheegay Kanaal ciyaaraha lagu baahiyo oo Masar laga leeyahay.
"Hagaag haatan aniga ayaa halkan uga sheegaya in Maxamed Salaax uu yahay dookheyga koobaad, wanaanan u baahanahay in uu Tokyo nala aado.
"Waa suragal inaan u yeero mid ama laba ciyaartoy oo ay da'doodu wayn tahay, welina arrintaas waan ka fakarayaa hasayeeshee haddii Liverpool ay diido inay Salaax soo dirto, iskuma dayi doono in qof kale aan ku daro liiska.
Tartanka kubadda cagta ee ciyaartoyda ragga ayaa waxa uu socon doonaa laga bilaabo 24-ka bisha July ilaa 9-ka bisha Agoosto ee sanadka soo socda taas oo ka dhigan in Salaax uusan dheeli doonin ciyaaraha furitaanka Horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka soo socda.